UDaniel Martín Serrano. Udliwanondlebe nombhali we Insomnia | Uncwadi lwangoku
UDaniel Martin Serrano Inkulumbuso yenoveli enesihloko esimnyama esimnyama, Insomnio. Kodwa le Madrilenian sele inembali ende njengoko uthotho lombhali umabonwakude phakathi kwazo Isibhedlele esiPhakathi, Velvet, Imfama kwiindawo zokuqeshwa, El Príncipe, Ukungcatsha y Iilwandle eziphakamileyo. Ukongeza, uprofesa weSkripthi seTelevishini kwiSikolo seFilimu saseMadrid. Kule udliwano ndlebe Usixelela ngenoveli yakhe nokunye okuninzi. Ndiyabubulela kakhulu ububele nexesha ukuba uzinikele kum.
UDaniel Martín Serrano-Udliwanondlebe
UNCWADI NAMHLANJE: Ingqele, isingqi kunye nobuchule beskripthi okanye isingqisho senoveli nobuchule?
UDANIEL MARTÍN SERRANO: Ekugqibeleni konke malunga nokubalisa ibali. Obu buchule bohlukile, ewe, kodwa yintoni eyenza umahluko omkhulu Umbhalo wenoveli yindlela yokusebenza. Izikripthi zokubhala ngumzamo weqela apho abantu abaninzi bathatha inxaxheba kwaye unoluvo lwabavelisi, uthungelwano kunye namaqonga, uninzi lwezigqibo lwenziwa kunye. Phambi kwenoveli, ndim ndedwa owenza ezi zigqibo, ndinguye othabatha isigqibo sokuba kwenzeka ntoni kwaye kwenzeka njani. Kwaye ngokuchaseneyo nendlela yokusebenza kwiskripthi, ngamanye amaxesha inkululeko endiyinikwayo yinoveli iyanconywa.
Kodwa andinakukhetha iskripthi okanye inoveli okanye ubuncinci kunzima ukuba ndikhethe enye okanye enye. Kumaxesha amaninzi Libali ofuna ukulibalisa eligqiba ukuba lifuna ukubaliswa njani, ukuba ngohlobo lweskripthi, inoveli, ibali kunye nomdlalo.
AL: Ngomsebenzi omde njengombhali wesikrini, ngoku wenza ityala lakho kuncwadi olusulungekileyo nolulula ngenoveli emnyama emnyama, Insomnio. Kutheni kwaye siyintoni kuyo?
I-DMS: Njengokuba phantse kuwo wonke umsebenzi ucebisa imingeni emitsha kwaye ukubhala le noveli kum yayi. Emva kweminyaka ndibhala izikripthi kwaye sele ndiqale iinoveli ezithile ndaye ndagqiba kwelokuba ndigqibe enye, Ndibonise ukuba wayenako ukwenza njalo. Yayiyinjongo yam yokuqala. Ukubanako ukuyipapasha sele kude kudlula kulindelo lwam lokuqala.
En Insomnio umfundi uya kufumana ifayile ye- Inoveli emnyama, emnyama kakhulu, ineeplani ezimbini, enye ibaliwe ngaphambili nakwi enye ngoku. Kuqala, umlinganiswa ophambili, UThomas Abad, ngumhloli we Ipolisa ophetheyo ekufumaneni i- Asesino yabafazi abohlukeneyo. Njengoko ityala liqhubeka uyakufumanisa oko umntakwabo ngandlela thile ubandakanyekile. Ukuzama ukukhusela uza kugqiba uphulukane nomsebenzi.
Kwinxalenye yangoku, uTomás usebenza ubusuku njenge umkhekheli wokhuselo ukusuka emangcwabeni nalapho, ehlukunyezwa ngumntu ofihle ezithunzini, uyaqonda ukuba ityala alikavalwa.
Insomnio Inoveli ene iyelenqe elijikeleza ngakumbi nangakumbi kwaye oko akuniki sithuba kumfundi. Unayo kakhulu umoya omhle, ophambili kwabo bangena emphefumlweni wakho, kwaye ayilunganga ukuba ndiyitsho, kodwa kunjalo ibhalwe kakuhle kakhulu. Ngoku iya kuba ngabafundi ekufuneka bayigwebe.
AL: Ukubuyela umva ngexesha, uyayikhumbula incwadi yokuqala oyifundileyo? Kwaye ibali lokuqala olibhalileyo?
I-DMS: Ukufundwa kwam kokuqala, njengoninzi lwesizukulwana sam, yayizincwadi ezivela kwingqokelela B.Ukugoba umphunga, Abahlanu, uJules Verne, uAgatha Christie...
Ngokubhekisele kwinto yokuqala endiyibhalileyo andinayo inkumbulo ecacileyo, ndiyayazi loo nto esikolweni xa kufuneka ubhale wayeqhele ukugqama. Kancinci kancinci, ewe, ndaqala ukubhala ibali kwaye yindlela endenze ngayo uhlobo oluthile lwesidingo oko kwakhokelela ekubeni ndibhale ngakumbi nangakumbi. U-Pessoa wathi ukumbhalela yayiyindlela yakhe yokuba yedwa kwaye ndiyavumelana kakhulu nale ngxelo.
AL: Le ncwadi ichukumise umphefumlo wakho yayingu ...
I-DMS: Zininzi. Andinakukhetha enye. Ezo ncwadi ndinolwazi ngazo ngomsebenzi wombhali osemva kwazo zindiphawulile. Ndingakuthiya igama Inyosi, Ukusuka eCela, Kuthambile ubusukunguFitzgerald, Isixeko kunye neenja, NguVargas Llosa, Ukukhala kwesikhova, nguHighsmtih, uNefando nguMonica Ojeda, uninzi lweenoveli zikaMarías ...
AL: Kwaye lo mbhali uyintandokazi yesalathiso okanye ugqozi? Unokukhetha ngaphezu kweyodwa nakwezinye iindawo.
I-DMS: Mhlawumbi kunjalo UJavier Marias Umbhali onokuthi eyona nto inefuthe kum. Ndiqale ukumfundela kuloo minyaka xa kwaqala ukucaca ukuba ndifuna ukuzinikela ekubhaleni. Isitayile sakhe, indlela yakhe yokuxelela yinto endinayo kakhulu engqondweni. Kodwa zininzi ezinye: UVargas Llosa, uGarcía Márquez, uLobo Antunes, URichard Ford, uPatricia Umkhandi weentsimbi, UJoyce Carol Oates, USofi Oksanen, uMartín Gaite, UDostoevsky, I-Pessoa...
AL: Nguwuphi umlinganiswa wokubhala onqwenela ukudibana naye kunye nokwenza?
I-DMS: Inoveli endihlala ndifunda kwakhona kakhulu yiyo Igatsby enkulu kwaye ungomnye wabalinganiswa endibathanda kakhulu kuncwadi. Yonke imisebenzi kaFitzgerald igcwele ngabalinganiswa abanamanqwanqwa amaninzi owafumeneyo kufundo ngalunye olutsha. Kwaye uGatsby ngomnye wabalinganiswa endibathandayo.
I-DMS: Andinayo nayiphi na imania ebonakalayo xa kuziwa ekubhaleni. Into endingayithethayo yile Ndinesazela, ndibhala kwaye ndibhala kwakhona kakhulu de ndoneliseke sisiphumo. Andinguye umbhali okhawulezayo, ndicinga kwaye ndicamngce kakhulu malunga namanyathelo okuthatha zombini kwinoveli nakwisikripthi kuba ndiqinisekile ukuba umsebenzi olungileyo uhlawula iziphumo ezilungileyo.
Kwaye ubugcisa bokubhala busengumsebenzi kwaye, ngenxa yoko, Ndizama ukubhala yonke imihla, Ndinayo ishedyuli yam, andinguye omnye wabo bathatyathwa bephefumlelwe, ihlala kancinci kakhulu. Kwakhona Ndiyathanda ukuba neeprojekthi ezininzi ngesandla ngaxeshanyeKe xa ndibambekile kwenye, ndingathatha enye kwaye ndiqhubeke ndiye phambili. Yeyona ndlela ilungileyo yokoyisa iibhlokhi, ukuvumela amabali ukuba aphumle okwethutyana.
Y ngexesha lokufunda mhlawumbi eyona nto ndiyithandayo kukuba Ndifuna ukuthula, akukho nto izakundiphazamisa.
I-DMS: Ndihlala ndibhala ekhaya, kodwa amaxesha ngamaxesha ndiyathanda ukutshintsha ukuya ku ikatala, enye ithala leencwadi. Olo tshintsho lwembonakalo yomhlaba, ngokuthetha, Inceda ukuba ndikhuphe umoya kwaye ungabinalo uvakalelo oluqhelekileyo lokuhlala usebenza endaweni enye. Kuyinyani ukuba ubhubhane utshintshe lo mkhwa kum, kodwa ndiyathemba ukuba kwinqanaba elithile ndiza kuba nakho ukuwuqala kwakhona.
AL: Uhlobo loncwadi olunomtsalane kuwe?
I-DMS: Inyaniso yokuba inoveli yam yokuqala yeyolwaphulo-mthetho okanye uhlobo lolwaphulo-mthetho ayithethi ukuba lolona hlobo ndiluthandayo, enyanisweni, andinguye umfundi omkhulu wobuxoki. Ngokwenyani into endiyithandayo, nangona kubonakala kuyinyani, ziincwadi ezilungileyo. Kwaye yintoni incwadi elungileyo kum? Lowo xa ugqibile ukuyifunda uyazi ukuba iya kuhamba nawe ubomi bakho bonke, apho ndiqonda khona ukuba ngasemva kukho umbhali olungileyo kwaye ndibona umsebenzi inoveli unawo, undenza ndicinge, undishiya ngasemva. Kwaye incwadi elungileyo ikwayenye evelisa umona othile kum, umona osempilweni, ngokungazi ukuba ngenye imini ndiya kuba nakho ukubhala into elolo hlobo.
AL: Ukufunda kwakho kwangoku? Kwaye ungasixelela le nto uyibhalayo?
I-DMS: Ufundo luyaqokelelana, Ndithenga ngaphezu kwexesha endinalo lokufunda. Ndidla ngokufika emva kwexesha kwiindaba ke ngoku ndiyafunda UBerta Isla, nguJavier Marías, kwaye ndinabanye abaninzi etafileni abalinde ithuba labo.
Kwaye le ndiyibhalayo, ngoku ndinguye ukusebenza kuthotho endingasathethi kakhulu ngalo kodwa oko kuyakubona ukukhanya kunyaka olandelayo kwaye Ndizamile ukumila Ndingathanda ukuba ibe yintoni inoveli yam yesibini. Utshintsho kwirejista, inoveli esondeleyo kunye neyomntu othetha ngothando, kungekhona inveli yothando, kodwa inveli malunga nothando nendlela esilubona ngayo okanye esiphila ngayo kuyo yonke le minyaka, ukusuka kwinqanaba lokufikisa ukuya kwinto esiyibiza ngokuba yiminyaka ephakathi.
I-DMS: Kunzima. Ndicinga ukuba kukho uhlobo ukungxamiseka kokufuna ukupapasha okodlula ngamanye amaxesha into ebaluleke ngaphezu kwayo Ndifuna ukubhala. Nayiphi na incwadi, nokuba yinoveli, isincoko okanye naluphi na uhlobo oluthile, ifuna ixesha lomsebenzi, ukubhala okuninzi kunye nokubhalwa ngokutsha kwaye indinika imvakalelo yokuba iinoveli ezingasetyenziswanga ngokwaneleyo zipapashiwe kwaye, ngaphezulu kwako konke, ziyazipapasha.
Injongo yabo babhalayo kukupapasha, ewe, kodwa umbhali kufuneka azifunele isiqu sakhe, ayisiyiyo nje into eluncedo ukuba ipapashwe nokuba umntu ufuna kangakanani, Kuya kufuneka unciphise i-ego ukuya kuthi ga xa ubhala. Elinye inqaku elibi njengoko lipapashiwe ngoku kukujonga indlela iinoveli ezintle ezingabonakali ngayo kwaye ezinye ezingakhanyisi kangako ziyaphumelela. Ngamanye amaxesha ukunyuselwa kwiinethiwekhi zentlalo kusebenza ngaphezulu komgangatho wenoveli uqobo. Ndiyathemba ukuba olu tshintsho.
AL: Ngaba ngewawucinge iskripthi somzuzu obalulekileyo esihlala kuwo? Ngaba unganamathela kwinto elungileyo okanye eluncedo kumabali exesha elizayo?
I-DMS: Bekusoloko kukho amabali ohlobo lwe-apocalyptic ethi, ngale covid, yeyona ikufutshane kuye. Kuyinyani ukuba ukuhlala emntwini wokuqala kwahlukile, kodwa ukuba kuye kwafuneka ndihlale nento elungileyo, injalo amandla okunyamezela ngengqondo esiye safunda ukukhulisa sonke. Kuyinyani ukuba ngamanye amaxesha kubonakala ngathi umntu ufikelele kumda wokuzihlukanisa, ukukruquka kwaye angaboni ukuphela kweli phupha. Kodwa ndicinga ukuba, ngokwemiqathango ngokubanzi, ngubani omnye ongazi kancinci ukuba angamelana njani nayo ngeyona ndlela ifanelekileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Udliwano-ndlebe » UDaniel Martín Serrano. Udliwanondlebe nombhali we-Insomnia